အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ တောရွာက လူငယ်လေးများရဲ့ ဇာတ်သဘင်တင်ဆက်မှု မိုက်တယ်ဗျာ…. – Shwe Yaung Lan
HomeLifestyleအွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ တောရွာက လူငယ်လေးများရဲ့ ဇာတ်သဘင်တင်ဆက်မှု မိုက်တယ်ဗျာ….
အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ တောရွာက လူငယ်လေးများရဲ့ ဇာတ်သဘင်တင်ဆက်မှု မိုက်တယ်ဗျာ….
အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ တောရွာက လူငယ်လေးများရဲ့ ဇာတ်သဘင်တင်ဆက်မှု မိုက်တယ်ဗျာ….ပွဲတောင်ကြည့်ချင်သွားတယ် ဇာတ်ပွဲတွေမကြည့်ရတာတောင်ကြာပြီ ဖရဲသီးသယ်တွေရော ဓာတ်မီးထိုးပြတဲ့လူတေရောစုံစိလို့ အားပေးလိုက်ကြပါအုံးနော်
လက်ရှိအချိန် လက်ရှိအခြေအနေမှာ မိမိဘဝကို ပျော်ရွှင်အောင်နေတတ်ခြင်းကသာ စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုဖြစ်ပီး ပျော်ရွှင်ခြင်းကို မိမိမှာပဲရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကဲ ဗွီယိုဖိုင်လေးကို ကြည့်လိုက်ကြပါအူးဗျာ။ သူတို့ အကအလှတွေကို သဘောကျတယ်ဆိုရင် ရှဲပေးသွားလိုက်ပါ။ သင့်သူငယ်ချင်းတွေလည်း ကြည့်ပီးပျော်ရတာပေါ့ဗျာ